Iindaba-Shenzhen SOSLLI Technology Co, Ltd. iprofayili
Isiqinisekiso kunye nembasa
I-18650 Ibhetri yeLithium
Ibhetri yeLithium Polymer
Ibhetri yokuGcina amandla
Ibhetri yamandla yeLithium
Ibhetri yeTshisa elisezantsi
Ibhetri ebanzi yeBhetri
Ibhetri yeLithium Titanate
Ibhetri yeLithium ion
I-3.7V Li-Ion Iseli
I-3.7V Li-Ion pack
I-7.4V Li-Ion pack
I-11.1V Li-Ion pack
I-14.8V Li-Ion pack
I-18.5V Li-Ion pack
Ipakethi ye-24V Li-Ion
I-36V Li-Ion pack
Ipakethi ye-48V Li-Ion
I-60V Li-Ion pack
I-72V Li-Ion pack
I-3.2V LiFePO4 Iseli
I-3.2V ye-LiFePO4 ipakethe
Ipakeji ye-6.4V LiFePO4
Ipakethi ye-9.6V ye-LiFePO4
Ipakethi ye-12V ye-LiFePO4
Ipakeji ye-24V ye-LiFePO4
I-36V LiFePO4 pack
I-48V ye-LiFePO4 ipakethe
I-60V ye-LiFePO4 ipakethe
I-72V ye-LiFePO4 ipakethe
Iindaba kunye nevidiyo
Ukusetyenziswa kunye nesisombululo
Shenzhen SOSLLI Technology Co, Ltd. iprofayile
I-Shenzhen SOSLLI Technology Co, Ltd yasekwa ngonyaka ka-2011. Lushishino lwezobuchwepheshe oluphezulu olugxile kwiR&D, ukuvelisa kunye nokuthengisa iibhetri zeLithium. Okwangoku inamacandelo amathathu eshishini: i-lithium yebhetri yokwenza iseli, ukugqitywa kwemveliso, kunye ne-brand yayo ye-SOSLLI. Ezona mveliso ziibhetri ze-polymer ze-lithium, iibhetri ezi-ultra-thin and ultra-encinci, iibhetri ze-lithium ezenziwe ngesangqa, imithombo yamandla eselfowuni, iipakethe zebhetri ze-lithium ze-18650, iibhetri zezithuthi zombane, iibhetri ze-hydride ze-nickel-iron kunye nezinye iibhetri. Iimveliso zenkampani zithengiselwe amazwe amaninzi kunye nemimandla e-Asia, Europe, North America, South America, Hong Kong nase Taiwan.
Inkampani inabasebenzi abangaphezulu kwe-1,600 yemveliso, abasebenzi abalunga ne-110, nangaphezulu kwengama-65 abasebenzi abaziingcali nabachwephesha; Uninzi lwabaphathi benkampani abavela kwiinkampani ezaziwayo zangaphandle. Inkampani inemigca yemveliso ezenzekelayo ye-18650, iilayini zemoto ezizenzekelayo ezili-14500, kunye nemveliso yemihla ngemihla yemveliso engaphezulu kwe-100,000. Inkampani isebenza ngokungqongqo ngokuhambelana ne-ISO9001: inkqubo esemgangathweni ye-2008, kwaye iimveliso zayo zigqithile IEC.MSDS.UN38.3.ROHS. isiqinisekiso. Isetyenziswe kakuhle kwibhrashi yamazinyo yombane, izacholo ezijongiweyo, iaudiyo yeBluetooth, amandla eselfowuni, ukukhanya kwecandelo lezombane, iibhayisikile zombane, izixhobo zovavanyo lweshishini, iithoyi ze-elektroniki, inqwelo moya yomoya, iimveliso zabantu abadala kunye nezinye iimveliso zombane. Kususela ekusekweni kwenkampani, ibigxile ekuphuculeni umgangatho, ulawulo lweendleko kunye nokuhanjiswa kwangexesha. Ngokusebenza kwexabiso elifanelekileyo lemveliso kunye nenkonzo elungileyo, iphumelele abathengi ukwaneliseka okugcweleyo kunye nentsebenziswano yexesha elide, kunye kunye nabathengi ukuya empumelelweni!
Ukunyaniseka, ukomelela kunye nomgangatho weemveliso zeShenzhen Suosili Technology Co, Ltd zivunywe lushishino. Inkampani okwangoku ineeofisi zokuthengisa kuMbindi weTshayina, eMpuma yeTshayina kunye noMzantsi China ukubonelela ngenkxaso yezobugcisa iiyure ezingama-24. Abona bathengi baphambili sisebenzisana nabo zezi: I-Panasonic, i-Philips, i-voltronicpower kunye nezinye iimpawu zelizwe jikelele. Ezi mveliso zithunyelwa ngaphandle eYurophu, eMelika, e-Australia, e-Afrika, e-Asia nakwamanye amazwe ehlabathi.
Ngokwenyani samkele abathengi ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba bandwendwele inkampani yeSuo Sili ngesikhokelo, uthethathethwano ngeshishini kunye nophuhliso oluqhelekileyo!
Ixesha lokuposa: Jul-08-2020
I-SOSLLI yayineenkqubo eziphambili zokwenza ibhetri, ikhabhathi yokuguga, isixhobo sokuvavanya i-BMS, izixhobo zokuvavanya iipakethi ze-li-ion ezikhoyo, umatshini ozenzelayo ozenzekelayo, umatshini othobela isixhobo ngokuzenzekelayo kunye neziko lovavanyo.
Iiseli zebhetri zeLithium Ion, Ipakethi yebhetri yamandla, I-20ah iLithium Ion ibhetri, Ibhetri yamandla eLithium, Ipakethi yeBhetri yeLithium, I-3.6v ibhetri yeLithium-Ion,
I-3 / F, iBldg. A, Indawo yaseTongfeng yeNdawo, uNo.29 Longwan Market Rd., Isitalato i-Kengzi, iSithili sePingshan esitsha, iShenzhen, China 518122